လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါ - ဝီကီပီးဒီးယား
လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါ (sexually transmitted disease, STD) သို့ လိင်ဆက်ဆံမှုမှ ရောဂါ ကူးစက်ခြင်း (sexually transmitted infection, STI) ကို လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှ တဆင့်ကူးစက်သည့် ရောဂါ (STI) သို့မဟုတ် ကာလသားရောဂါ(VD) ဟုလည်း သိရှိကြပြီး ၎င်းရောဂါသည် လူ (သို့မဟုတ်) တိရစ္ဆာန်တို့တွင် အလွန်သိသာ ထင်ရှားစွာကူးစက် နိုင်ခြေရှိသော အခြေနေတစ်ခုမှာ မိန်းမကိုယ်မှတဆင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ ပါးစပ်နှင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ စအိုမှ လိင်ဆက်ဆံခြင်းတို့ အပါအဝင်လူတို့၏ လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူမှတဆင့် ကူးဆက်ပြန့်ပွားခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ကာလများက ဤကဲ့သို့သော ရောဂါမျိုးများကို လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် ရရှိသော ကူးစက်ရောဂါများ STDs သို့မဟုတ် ကာလသားရောဂါ VD ဟု ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုခဲ့ကြပြီး ယခုအခါ ထို့ထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှ တဆင့်ကူးစက်သည့် ရောဂါ (STI) ဟု ပြောင်းလဲ ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုသည်။ ရောဂါရှိထားသူသည် ရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲ အခြားသူတစ်ဦးသို့ ရောဂါကူးစက်နိုင်သည့် အတွက်ကြောင့် ပြောင်းလဲရည်ညွှန်း ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့သော လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှတဆင့် ကူးစက်သည့် ရောဂါများသည် ရောဂါရှိပြီးသူ သုံးစွဲခဲ့သည့် ဆေးထိုးအပ်ကို သုံးစွဲ မိ၍သော်လည်းကောင်း၊ ကလေးမွေးဖွားခြင်းနှင့် မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်း တို့မှလည်းကောင်း ရရှိနိုင်သည်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှတဆင့် ကူးစက်သည့်ရောဂါသည် နှစ်ပေါင်းရာချီ၍ လူသိများထင်ရှားသောရောဂါဖြစ်သည်။
ရှန်ကရိုက် (ဟီမိုဖီးလပ် ဒူခရေး)
ချလမ်မိုင်ဒီးယား (ချလမ်မိုင်ဒီးယား ထရကိုမက်တစ်)
ဂရန်နျူလိုမား အင်ဂွိုင်နေး သို့မဟုတ် (ကလက်စီလာ ဂရန်နျူလိုက်မက်တစ်)
ဂနိုရီးယား (နိုင်စေရီးယား ဂနိုရီရေး)
ဆစ်ဖလစ် (ထရက်ပိုနီးမား ပယ်လီဒမ်)
တီးနီးယား ခရူးဆစ် “ ပေါင်ခြံတဝိုက်တွင် ယားယံခြင်း ” လိင်မှတဆင့် ကူးစက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ကန်ဒီးဒီးရေးစစ် သို့မဟုတ် မှိုမှတဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါပိုး
၃ ရေယုန်ပေါက်နေသူ (STD)
၄ ရောဂါကူးစက်ဝင်ရောက်ရခြင်း၏ အကြောင်းအရင်း
၅.၁ ဘေးကင်းစိတ်ချရသည့် လိင်ဆက်ဆံမှု
၅.၄ စနစ်တကျသုံးစွဲရန် လိုအပ်ချက်များ
ရေယုန်ဗိုင်းရပ်ပိုး၏ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲလာသော ဆဲလ် အဏုပုံရိပ် (နျူကလီးယားမျိုးစုံပါဝင်သော နျူကလီးယား အစုကို မှန်အောက်မှတွေ့ရခြင်း)
ပိုးနမူနာယူ၍ စစ်ဆေးခြင်း. ပိုးနမူနာကို အရောင်ဆိုး၍ ကြည့်ရှုခြင်းဗိုင်းရပ်ကြောင့် ဖြစ်သော အသည်းရောင်ရောဂါ (အသည်းရောင် အသားဝါ B ရောဂါ ပိုး) - တံတွေးအရည်၊ လိင်အင်္ဂါမှအရည်(မှတ်ချက် - အသည်းရောင်အသားဝါ A ရောဂါပိုး နှင့် အသည်းရောင် အသားဝါ E ရောဂါပိုးတို့သည် မစင်မှ ပါးစပ်လမ်းကြောင်းပေါက်မှ တဆင့်ကူးစက်သည်။) အသည်းရောင် အသားဝါ C ရောဂါပိုး (အသည်းကင်ဆာ)သည် လိင်မှတဆင့် ကူးစက်ခဲသည်။ အသည်းရောင် အသားဝါ ရောဂါပိုး (အကယ်၍ B ပိုးနှင့်အတူ ကူးစက်သည်) ကူးစက်နိုင်သောလမ်းကြောင်းကို သေသေချာချာ မသိပါ။ သို့သော် လိင်မှတဆင့် ကူးစက်ခြင်းတွင် ပါဝင်နိုင်သည်။
ရေယုန် (ဟားပီးစ် ဆင်းပလက်ဗိုင်းရပ်စ် ၁, ၂) အရေပြားနှင့် အချွဲမြှေးတွင် မြင်သာသည့် ရေယုန် အဖုငယ် များရှိရှိ၊ မရှိရှိ ကူးစက်နိုင်သည်။
အိတ်ချ်အိုင်ဗွီ/အေအိုင်ဒီအက်စ် (လူတွင် ခုခံအားကျဆင်းစေသည့် ဗိုင်းရပ်စ်) - လိင်အင်္ဂါအရည်များမှ ကူးစက်သည်။
အိတ်ချပ်ပီဗွီ (ပါပီလိုးမားဟုခေါ်သောကြွက်နို့ ဗိုင်းရပ်စ်) - အရေပြားနှင့်အချွဲမြှေးတို့ကို ထိတွေ့ခြင်းမှကူးစက်သည်။ ပြင်းထန် သည့် အိတ်ချ်ပီဗွီအမျိုးအစားများသည် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဖြစ်စေသည်။ ထိုနည်းတူစွာ စအို၊ ယောက်ျား လိင်အင်္ဂါထိပ်နှင့် အမျိုးသမီးလိင်အင်္ဂါတို့တွင် ကင်ဆာဖြစ်ပြီး လိင်အင်္ဂါတွင်ကြွက်နို့များကိုပါ ဖြစ်စေသည်။
မိုးလပ်စကမ် ကွန်တေဂျီအိုဆိမ် (မိုးလပ်စကမ် ကွန်တေဂျီအိုဆိမ် ဗိုင်းရပ်စ် MCV) ထိတွေ့ခြင်းမှ ကူးစက်သည်။
ကရက်သန်း (ဗီသီးရီးယပ်စ် ပြူးဗစ်)
ဝဲရောဂါ (ဆာကော့တီး စကေးဘီး)
ထရိုင်ကို မိုနီယားစစစ် (ထရိုင်ကိုမိုးနတ်စ် ဗဂျိုင်းနယ်လစ်)
များစွာသော လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့်ရရှိသော ကူးစက် ရောဂါများ STDs သည် ယောက်ျားတန်ဆာ၊ မိန်းမအင်္ဂါစပ်၊ စအို၊ ဆီးလမ်းကြောင်းတို့၏ အချွဲအမြှေးများမှတဆင့် (ပို၍လွယ်ကူစွာ) ကူးစက်နိုင်သည်။ ပါးစပ်၊ လည်ချောင်း၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းနှင့် မျက်လုံးတို့မှ (ဖြစ်ပွားသည့် ရောဂါပိုးအပေါ် မူတည်ပြီး ရံဖန်ရံခါ အနည်းငယ်) ကူးစက်နိုင်သည်။ ယောက်ျားတန်ဆာ၏ ထိပ်ပိုင်းကို ဖုံးအုပ်သည့် မျက်စိဖြင့် မြင်ရသော အမြှေးသည် အချွဲမြှေးတစ်ခု ဖြစ်သော်လည်း အချွဲထွက်ခြင်း မရှိပါ ။ (ပါးစပ်၏ နှုတ်ခမ်းများနှင့် ဆင်တူသည်)။ အချွဲမြှေးများသည် ထိုသို့ အရေပြားနှင့် ကွဲပြားခြားနား နေသည့်အတွက် ယင်းတို့သည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းသို့ ရောဂါပိုး ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ခွင့်ပြုထားသလိုဖြစ်သည်။
ရောဂါပိုးများသည် အရေပြားရှသည့်နေရာ၊ ပွန်းပဲ့သွားသည့်နေရာတို့မှလည်း မိနစ်ပိုင်းတွင်း ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ယောက်ျား၏ လိင်တံသည်လည်း ဖိုမဆက်ဆံရာမှ ပွတ်တိုက်မှုများပြီး၊ ရောဂါကူးစက်ရန်အတွက် လွယ်ကူသည့်နေရာ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရောဂါရစေသည့် မူလပထမနေရာများမှာ ဖြစ်နိုင်မှုအများဆုံး အစီအစဉ်အလိုက်တွင် လိင် အင်္ဂါမှထွက်သည့်အရည်များ၊ တံတွေး၊ အချွဲမြှေးသို့မဟုတ် အရေပြား(အထူးသဖြင့် ယောက်ျားတန်ဆာ ၏ အရေပြား) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ရောဂါကူးစက်ခြင်းသည် မစင်၊ ဆီးနှင့် ချွေးတို့မှ တဆင့်လည်း ကူးစက်နိုင်သည်။ ဘယ်လောက်အရေအတွက်ရှိလျှင် ရောဂါကူးစက်နိုင်သလဲဆိုသည်မှာ ရောဂါပိုး တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ကွဲပြားနေပြီး သာမန်မျက်စိဖြင့် ကြည့်လျှင်မမြင်ရသည့် အရေအတွက်ထက် လျော့နည်းနေလျှင်ပင် ရောဂါကူးစက်နိုင်သည်။
ရောဂါအများစု၏ ကူးစက်နိုင်မှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအကြောင်းအရာတစ်ခုမှာ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်ခြင်းသည် လိင်ကိစ္စမဟုတ်သည့် ထိတွေ့ခြင်း၊ ပွေ့ဖက်ခြင်း၊ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းတို့ထက် များစွာ ကူးစက်မှုနှုန်း မြင့်မားသော်လည်း ၎င်းသည် တစ်ခုတည်းသော အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။ လိင်အင်္ဂါများကဲ့သို့ ပါးစပ်အတွင်းတွင်လည်း အချွဲမြှေးများ ရှိနေသဖြင့်၊ ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် နှုတ်ခမ်းချင်း စုပ်ပြီး နမ်းသည်ထက် STIs ရောဂါကူးစက်မှု ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ဘေးကင်းစိတ်ချရသော လိင်ဆက်ဆံမှု စာရင်းဇယားအရ၊ များစွာသော ရောဂါများသည် ပါးစပ်မှ လိင်အင်္ဂါ သို့မဟုတ် လိင်အင်္ဂါမှ ပါးစပ်သို့ လွယ်ကူစွာ ကူးစက်နေကြသော်လည်း၊ ပါးစပ်တစ်ခုမှ အခြားပါးစပ်တစ်ခုသို့ ရောဂါကူးစက်နိုင်မှုမှာများစွာ ခက်ခဲသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။  ခုခံအား ကျဆင်းမှု ရောဂါဗိုင်းရပ်ပိုးသည် လိင်အင်္ဂါမှ ထွက်သည့် အရည်တွင် တံတွေးထက် ရောဂါပိုးပါဝင်မှု ပိုမိုများပြား သည်ကိုတွေ့ရသည်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှတဆင့် ကူးစက်သည့်ရောဂါ STIs ဟု အမည်တပ်ထားသည့် ရောဂါအချို့သည် အရေပြားခြင်းတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရုံဖြင့် ရောဂါကူးစက်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ရေယုန်နှင့် အိတ်ချ်ပီဗွီ ဟုခေါ်သောကြွက်နို့ (HPV) တို့သည် ဥပမာများဖြစ်သည်။ အခြားတစ်မျိုးမှာ KSHV ရေယုန်သည် နှုတ်ခမ်းခြင်း စုပ်နမ်းခြင်းဖြင့် ရောဂါကူးစက်နိုင်ယုံမက တံတွေးကို လိင်ဆက်ဆံမှု၏ ချောဆီအဖြစ် သုံးစွဲသည့်အခါတွင်လည်း ကူးစက်သည်။
လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် ရရှိသော ကူးစက်ရောဂါအပေါ် မူတည်၍ တစုံတယောက်သည် ရောဂါလက္ခဏာ မပြသော်လည်း အခြားသူများသို့ ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ရေယုန်ပေါက်နေသူ (STD) သည် မပေါက်သူ (STI) ထက် ရေယုန် ရောဂါပြန့်ပွားမှုကို ပို၍ဖြစ်စေသည်။ သို့သော်ငြားလည်း ယောက်ျားဖြစ်စေ၊ မိန်းမဖြစ်စေ၊ ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ (အေအိုင်ဒီအက်စ်) (STD) သည် ရောဂါလက္ခဏာ မပြသသော်လည်း အချိန်မရွေး HIV ရောဂါ (STI) ကူးစက် ပြန့်ပွားနိုင်သည်။
အားလုံးသော လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများသည် အခြားသူတစ်ဦး ခန္ဓာကိုယ်အရည်နှင့်ထိတွေ့ရသည်ဖြစ်၍ လိင်မှ တဆင့်ရရှိသည့် ရောဂါများ ကူးစက်နိုင်သည်ကို ကြိုတင်စဉ်းစားထားရမည်။ အေအိုင်ဒီအက်စ်ဖြစ်သည့် ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါဗိုင်းရပ်ပိုး ထိန်းသိမ်းချုပ်နိုင်ရေးကိုသာ အများဆုံး အလေးထား ဆောင်ရွက် နေကြသော်လည်း လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် ရရှိသော ကူးစက်ရောဂါတစ်ခုချင်းစီသည် မတူညီသော ရောဂါအခြေအနေများကို ဖော်ပြပါသည်။
ရောဂါနာမည်မှ မှတ်ချက်ပြုဖော်ပြနေသလို၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့်ရရှိသော ကူးစက်ရောဂါ ရောဂါများသည် တစ်ဦးမှတစ်ဦးသို့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ အပြုအမူများကြောင့် ကူးစက်သည်ထက် အမှန်တကယ်တွင် ထိုထိုသော လိင်မှု အပြုအမူများကြောင့် ကူးစက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဘက်တီးရီးယား၊ မှို၊ ပရိုတိုဇိုဝါ သို့မဟုတ် ဗိုင်းရပ်တို့သည် ရောဂါဖြစ်စေသည့် အကြောင်းတရားများအဖြစ်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ရောဂါမရှိသူနှင့် လိင်ဆက်ဆံ ခြင်းဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့်ရရှိသော ကူးစက်ရောဂါရရှိရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ပြောင်းပြန်အနေဖြင့်၊ STD ရောဂါရှိသူနှင့် (လိင်ဆက် ဆံခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအကြောင်းအရာကြောင့်) ခန္ဓာကိုယ်အရည် များနှင့်ထိတွေ့ပြီး ရောဂါရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ခုခံအားကျဆင်းမှုဗိုင်းရပ်ရောဂါပိုးကဲ့သို့(HIV) လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့်ရရှိသော ကူးစက်ရောဂါအချို့ STDs သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သို့မဟုတ် မိခင်နို့တိုက်ကျွေးချိန်တို့တွင် မိခင် မှ ကလေးသို့ ရောဂါကူးစက်နိုင်သည်။ ကူးစက်ရောဂါများ အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ချေသည် အမျိုးမျိုးသော လိင်အပြုအမူများကြောင့်ဟု အဓိကဆိုသော်လည်း၊ အားလုံးကို ခြုံငုံကြည့်လျှင်၊ နှစ်ယောက် (သို့မဟုတ် နှစ်ယောက်ထက်ပိုသော) ၏လိင်ဆက်ဆံမှု အပြုအမူများ အားလုံးသည် ရောဂါ STDs အပြန်အလှန်ကူးစက်နိုင်သည်။ ဥပမာ "ပေးခြင်း" သို့မဟုတ် "လက်ခံခြင်း" တို့ နှစ်မျိုးစလုံး အန္တရာယ်ရှိ ပြီး၊ လက်ခံခြင်းက ပို၍အန္တရာယ်များသည်။
ကျန်းမာရေး ပညာရှင်များသည် လိင်မှုကိစ္စတွင် ကွန်ဒုံးအစွပ် သုံးစွဲခြင်းကို ဘေးကင်းစိတ်ချရသည့် လိင်ဆက်ဆံခြင်း အဖြစ် အကြံပြုထားပြီး လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုသောအခါတွင် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် ရရှိသော ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုများကို လျော့နည်းစေသည့် အသင့်လျှော်ဆုံးသောနည်း လမ်းဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုထားသည်။ သို့သော် ဘေးကင်းစိတ်ချရသော လိင်မှုကိစ္စဆိုသည်မှာ အားလုံးပြည့်ဝသည့် စိတ်ချရမှုမဟုတ်ဟု အဓိပ္ပာယ်မှတ်ယူရမည်။ သွေးသွင်းခြင်းနှင့် အခြားသော သွေးပစ္စည်းများ၊ ဆေးထိုးအပ်များကိုမျှဝေသုံးစွဲခြင်း၊ဆေးထိုးရာတွင် အနာဖြစ်ခြင်းများ (ဆေးဝန်ထမ်းများမှ အသိမပေးဘဲ ဆေးထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးကုသနေစဉ် ဆေးထိုးအပ်များ ထုတ်လိုက်ချိန်များတွင်)၊ ဆေးမှင်ကြောင်ထိုးသောအပ်များကိုဝေမျှ သုံးစွဲခြင်းနှင့် ကလေးမွေးဖွားခြင်း တို့ကဲ့သို့သော ခန္ဓာကိုယ်အရည်များနှင့် ထိတွေ့လွှဲပြောင်းပေးခြင်းတို့သည် ရောဂါကူးစက်ဝင်ရောက်ရခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းများဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော ဖြစ်ရပ်များကြောင့် ဆေးဝန်ထမ်းများ၊ သွေးသွင်းရန် လိုအပ်သူများနှင့် မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲသူများသည် ရောဂါကူးစက်ရန် အန္တရာယ်အများဆုံး အုပ်စုဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီက ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားပုံ လေ့လာရှာဖွေမှုများအရ လူတစ်ဦးစီအတွင်း လိင်ဆက်ဆံမှုများကို စူးစမ်းရှာဖွေခဲ့ရာ လိင်ဆက်ဆံမှုကွန်ရက်များ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့်ရရှိသော ကူးစက်ရောဂါများ ပြန့်ပွားရာတွင် အဓိကကျကြောင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သီး⁠သီးသန့်သန့်အနေဖြင့် တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် လိင်ဆက်ဆံဖော်များစွာနှင့် ရောနှောပြီးလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် အရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့မြင်ရသည်။ ရောဂါလက္ခဏာမပြသော လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့်ရရှိသော ကူးစက်ရောဂါများ ဖြစ်နေသူလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သီးခြားအနေဖြင့် လိင်မှတဆင့်ရောဂါများရှိနေသည့် အမျိုးသမီးများတွင် ရံဖန်ရံခါ ပြင်းထန်သည့်တင်ပါးဆုံရိုး ရောင်ရမ်းသည့်ရောဂါ ဖြစ်တတ်သည်။
ကာကွယ်ခြင်းသည် ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ ဗိုင်းရပ်ပိုး(HIV) နှင့် ရေယုန်တို့ကဲ့သို့သော လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှတဆင့် ကူးစက်သည့်ရောဂါများSTIs ကို ကုသနိုင်သော သော့ချက်ဖြစ်သည်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှတဆင့် ကူးစက်သည့်ရောဂါများကို ကာကွယ် ရန် အကောင်းဆုံးထိရောက်သည့်နည်းလမ်းမှာ ရောဂါကူးစက်ခံထားရသူ၏ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း များ သို့မဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်အရည်များကို ထိတွေ့ခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန်ပင်ဖြစ်သည်။ မထိတွေ့လျှင် အန္တရာယ် ကင်းသည်။ အားလုံးသော လိင်မှုအပြုအမှုတို့တွင် ထိတွေ့မှုမရှိချေ။ အင်တာနက်မှလိင်မှု၊ ဖုန်းမှလိင်မှု သို့မဟုတ် တစ်ကိုယ်တည်း လိင်မှုပြုလုပ်ခြင်းတို့သည် အဝေးမှဖြစ်၍ ထိတွေ့မှုကို ရှောင်ရှားသည့်နည်း လမ်းများဖြစ်ကြသည်။ ကွန်ဒုံးအစွပ်ကို သင့်တော် စွာ အသုံးပြုခြင်းသည် ထိတွေ့မှုနှင့် ကူးစက်မှု အန္တရာယ်များကို လျော့နည်းစေသည်။
အကောင်းဆုံးကတော့ လိင်မဆက်ဆံခင် နှစ်ဦးစလုံး ရောဂါ STIs ရှိ/မရှိ ဆေးစစ်ထားကြရန် ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် မိမိအဖော် တစ်ခြားသူနှင့် မထိတွေ့မဆက်ခံခင် ဦးစွာထိတွေ့ဆက်ဆံထားရန်ဖြစ်သည်။ ရောဂါအများစုသည် ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးနောက် ချက်ချင်းရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်၍ မရပါ။ ထို့ကြောင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံ ခြင်းများနှင့်ရောဂါအတိအကျ စမ်းသပ်ရှာဖွေနိုင်ခြင်းတို့အကြားတွင် လုံလောက်သည့်အချိန်အတိုင်းအတာ ခွင့်ပြုထားရမည်။ သေချာသည့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှတဆင့် ကူးစက်သည့်ရောဂါများ STIs ဖြစ်သည့် အိတ်ချ်ပီဗွီလို (HPV) ဗိုင်းရပ်သည် လက်ရှိ ဆေးပညာလုပ်ဆောင် ချက်များဖြင့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမတွေ့ရှိနိုင်ပါ။ အမြဲတမ်း ကူးစက်ရောဂါအဖြစ် တည်ရှိနေသည့် ရောဂါအများစုသည် ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအား စနစ်တွင် နေရာယူထားနိုင်သည့်အတွက် အခြား⁠အခြားသော ရောဂါများသည်လည်း အလွယ်တကူဝင်ရောက် ကူးစက် လာနိုင်သည်။
ခုခံအားကျဆင်း မှုရောဂါဗိုင်းရပ်ပိုး (HIV) ကို ဆန့်ကျင်သည့် ကာကွယ်ရေးပရိုတိန်းများ ဦးဆောင်သော မွေးရာပါခုခံအား စနစ်သည် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကောင်ရေ အရေအတွက် နည်းနေသည့်အချိန်တွင် ခုခံအား ကျဆင်းမှု ရောဂါဗိုင်းရပ်ပိုး (HIV) ပြန့်ပွားမှုကို တားဆီး နိုင်သည်။ သို့သော် ၎င်းသည် အခြားသော ဗိုင်းရပ်များနှင့် အလုပ်ရှုပ်နေလျှင် သို့မဟုတ် လွှမ်းမိုးခြင်းကို ခံရလျှင် ခုခံအားကျဆင်းမှု ရောဂါဗိုင်းရပ်ပိုး (HIV) သည် သူ့ဘာသာ ရပ်တည် ထူထောင်လာနိုင်သည်။ အချို့သော လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှတဆင့် ကူးစက်သည့် ဗိုင်းရပ်ရောဂါ STI's သည် ခုခံအားကျဆင်း မှုရောဂါဗိုင်းရပ်ပိုး (HIV) ရသည့် လူနာများကို အသက်သေ ဆုံးသည်အထိအောင် တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင် သည်။
အသည်းရောင်အသားဝါဘီရောဂါ နှင့် အချို့သောအိတ်ချ်ပီဗွီ ခေါ် ကြွက်နို့ (HPV) ရောဂါများကဲ့သို့သော လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှတဆင့် ကူးစက်သည့်ရောဂါ(STIs) ဗိုင်း ရပ်ပိုးတို့ကို ကာကွယ်သည့် ကာကွယ်ဆေးများ ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ လိင်မဆက်ဆံခင် ကာကွယ်ဆေး ကြိုထိုးထားခြင်းသည် သေချာသည့် အမြင့်ဆုံးသော ကာကွယ် ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။
ကွန်းဒုံးအစွပ်များသည် ကြားခံအဖြစ်သုံးစွဲသည့်နေရာတဝိုက်ကိုသာ အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ဖုံးအုပ် ထားခြင်းမရှိသော လွတ်နေသည့်နေရာများသည် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့်ရရှိသော ကူးစက်ရောဂါများ STDs ကူးစက်ရန်အတွက် တည်ရှိနေသည်။ ခုခံအားကျဆင်းမှု ဗိုင်းရပ်ရောဂါပိုး(HIV) တွင် အရေပြားမှတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ရောဂါကူးစက်ရာ လမ်းကြောင်းသည် အမြဲတမ်း ယောက်ျားတန်ဆာမှ ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် မိန်းမကိုယ် သို့မဟုတ် စအိုသို့ ထိုးသွင်းမည့် ယောက်ျားလိင်တံတွင် ကွန်ဒုံးအစွပ်ကိုကောင်းမွန်စွာ ဝတ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် ရောဂါပြန့်ပွားမှုကို တားဆီးနိုင်သည်။
အရေပြား ရှရာပွန်းရာမှတဆင့် ရရှိသည့်ရောဂါသည်တိုက်ရိုက် ကူးစက်ခြင်းဖြစ်၍ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့်ရရှိသော ကူးစက်ရောဂါဟု ထည့်သွင်းမစဉ်းစားထားပါ။ သို့သော် စာအရ လိင်ဆက်ဆံမှုကာလအတွင်း ရရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းအခြေအနေကို ခန္ဓာကိုယ်တွင် သွေးထွက်သည့်ဒဏ်ရာ အနာ များရှိသည့်အချိန်တွင် လိင်ဆက်ဆံခြင်း မပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုမှ ရိုးစင်းစွာရှောင်လွှဲနိုင်သည်။ အခြားသော လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် ရရှိသော ကူးစက်ရောဂါများ STDs တွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်သည့်ရောဂါ ပါဝင်စေကာမူ ရာဘာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ကွန်ဒုံးအစွပ်များကို ကြားခံအဖြစ် သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ကူးစက်မှုကို ကာကွယ်နိုင်သည်။ အချို့သော အဏုဇီဝပိုးများနှင့် ဗိုင်းရပ်တို့သည် သဘာဝ အရေပြားနှင့်တူသည့် ကွန်ဒုံးအစွပ်များ၏ အပေါက်ငယ်လေးများကို ဖောက်ဝင် ဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်အထိ သေးငယ်ပါသည်။ သို့သော် ရာဘာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် အစွပ်များကို ဖောက်ဝင် ဖြတ်သန်းရန်အထိ မသေးငယ်တော့ဘဲ ကြီးနေသည်။
ကွန်ဒုံးအစွပ်အဖျားကို တင်းကျပ်စွာ စွပ်မထားရ။ အဖျားတွင် သုတ်ရည်ထွက်ရန်အတွက် ၁.၅ စင်တီမီတာ ( ၃/၄ လက်မ) နေရာချန်ထားရမည်။ အံဝင်ဂွင်ကျ စွပ်နိုင်ရမည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက ကျွတ်ထွက်နိုင်သည်။
ချောင်⁠ချောင်စွပ်ထားခြင်းသည် ကြားခံအဖြစ် သုံးစွဲခြင်းကို အကျိုးမဲ့စေသည်။
သုတ်ထွက်ပြီးသည်ဖြစ်စေ၊ မထွက်သေးသည် ဖြစ်စေ သုံးပြီးသား ကွန်ဒုံးအစွပ်ကို ပြန်လှန်၍ လည်းကောင်း၊ သွန်ပြီး၍လည်းကောင်း တစ်စက္ကန့်လေးတောင် မသုံးစွဲပါနှင့်။
ရာဘာ သို့မဟုတ် ပေါ်လီယူရီသင်းမှလွဲ၍ အခြားသောပစ္စည်းများနှင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ကွန်ဒုံးအစွပ်များသည် ခုခံအားကျဆင်းမှု ဗိုင်းရပ်ရောဂါပိုး(HIV) ကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိ၍ မသုံးစွဲပါနှင့်။
အဆီပါသော ချောဆီများကိုအသုံးပြုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ (သို့မဟုတ် အထဲတွင်အဆီပါသော) ရာဘာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ကွန်ဒုံးအစွပ်များ ကိုမသုံးသင့်ပါ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အဆီသည် အတွင်းတွင် စားတတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အနံ့ပါသော ကွန်ဒုံးအစွပ်များ ကို ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံ ခြင်း အတွက်သာသုံးပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အမြဲတမ်း ထိုးဖေါက်ရာတွင်အသုံးပြုပါက အနံ့တွင်ပါဝင်သော သကြားမှ မှိုရောဂါဖြစ်စေနိုင်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ပထမဆုံး လမ်းညွှန်ချက်များကို မလိုက်နာခြင်းသည် လွှဲမှားသည့်အမြင်ကို ဆက်လက် တည်တံ့နေစေပြီး ယင်းကွန်ဒုံးအစွပ်များသည် သင့်တင့်စွာ ထုတ်လုပ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် စမ်းသပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ မိမိရော မိမိ၏အဖော်ပါ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှတဆင့် ကူးစက်သည့်ရောဂါများSTIs မှ အကောင်းဆုံး အကာအကွယ်ပေးနိုင်မည့် အစီအစဉ်တွင် သုံးပြီးသား ကွန်ဒုံးအစွပ်ဟောင်းနှင့် ယင်းတွင်ပါရှိသည့်ပစ္စည်းများသည် ရောဂါကူးစက်နိုင်ချေရှိ သည်ဟု မှတ်ယူထားရမည်။ ထို့ကြောင့် သုံးပြီးအစွပ်ဟောင်းများကို သင့်လျော်စွာ စွန့်ပစ်ရမည်ဖြစ် သည်။ အကြိမ်များစွာ ပြန်လည်သုံးစွဲနေခြင်းသည် ပေါက်ပြဲလွယ်နိုင်ပြီး ကြားခံအဖြစ် ထားရှိသည့်ရည်ရွယ်ချက်သည် ပျက်ပြားသွားစေနိုင်၍ ကွန်ဒုံးအစွပ်သစ်တစ်ခုကို လိင်ဆက်ဆံမှု တစ်ကြိမ်စီ အတွက်သာ သုံးစွဲသင့်သည်။
ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ကုသခြင်းများ တိုးတက်နေသည့်အတွက် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့်ရရှိသော ကူးစက်ရောဂါSTD မရှိသူကို လျင်မြန် စွာ ရှာဖွေပေးနိုင်ခြင်းနှင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် ရရှိသော ကူးစက်ရောဂါSTDs ရှိသူများကို ကုသပေးနိုင်ခြင်းတို့ ရှိနေသော်လည်း လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် ရရှိသော ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု နှုန်းသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးနီးပါးတွင် မြင့်မားနေဆဲဖြစ်သည်။ များစွာသော ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့စရိုက်များတွင် လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့် ပတ်သက်သော စိတ်ဓာတ်ခံယူချက်ပုံစံ ပြောင်းလဲလာခြင်းနှင့် သန္ဓေတားဆေးတို့သည် အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများအတွက် ရိုးရာလိင်မှုတားဆီး ချုပ်ချယ်မှုများကို ဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်။ ဆရာဝန်များနှင့် လူနာများတွင် လိင်ကိစ္စများကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုဆွေးနွေးရန် အခက်အခဲများ ရှိနေပါသည်။ ပိုပြီး ဆိုးသည်မှာ ဆေးပြီးနေသည့် ဘက်တီး ရီးယား (ဥပမာ- ပင်နင်စလင်ဆေးခံနိုင်ရည်ရှိသည့် ဂနိုကိုကိုင်းပိုး) ပိုးများပြန့်နှံ့တိုးတက်လာသည့် အတွက် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့်ရရှိသော ကူးစက်ရောဂါများ STDs ကို ကုသရန် ခက်ခဲလာသည်။ ၁၉၇၀−ခုနှစ်များ နှောင်းပိုင်းတွင် ခရီးသွားလာခြင်း ၏ အကျိုးဆက်ကြောင့် ခုခံအား ကျဆင်းမှုရောဂါ AIDS ဗိုင်းရပ် (အိတ်ချ်အိုင်ဗွီ-ဝမ်း HIV-1) သည် အာဖရိကမှ ဥရောပနှင့် အမေရိကသို့ လျင်မြန်စွာ ပြန့်နှံ့ရောက်ရှိ လာသည်ကို တွေ့ရသည်။
လိင်မှုကိစ္စ တက်ကြွကြသည့် ပျိုရွယ်သူ မိန်းကလေးများတွင် လိင်အင်္ဂါလမ်းကြောင်း ရောဂါလက္ခဏာများရှိ သည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှတဆင့် ကူးစက်သည့်ရောဂါ များ STIs ပြန့်ပွားမှုနှုန်းသည် အများအားဖြင့် ချလမ်မိုင်ဒီးယား (၁၀–၂၅%)၊ ဂနို ရီးယား(၃–၁၈%)၊ ဆစ်ဖလစ် (၀–၃%)၊ ထရိုင်ကိုမိုးနပ်စ် ဗဂျိုင်းနယ်လစ် (၈–၁၆%)နှင့် ရေယုန် ဗိုင်းရပ်စ် (၂–၁၂%)တို့ပါဝင်သည်ဟု တင်ပြစီရင်ခံထားသည်။  ဆီးလမ်းကြောင်း ရောဂါလက္ခဏာများ မပြသသည့် ယောက်ျားလေး လူပျိုအရွယ်များအတွင်းတွင် ရောဂါတွေ့ရှိမှုနှုန်းမှာ ချလမ်မိုင်ဒီယား (၉–၁၁%)နှင့် ဂနိုရီးယား (၂–၃%) တို့ဖြစ်ကြသည်။
၁၉၉၆−ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ ခန့်မှန်းချက်အရ လူတစ်သန်းကျော်သည် နေ့စဉ်ရောဂါဖြစ် နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ယင်းရောဂါဖြစ်သူများထဲမှ ၆၀% သည် အသက် (၂၅)နှစ်အောက် လူငယ်များနှင့် ၃၀% သည် အသက် (၂၀)နှစ်အောက် လူငယ်များတို့ဖြစ်ကြသည်။ အသက် (၁၄)နှစ်မှ (၁၉)နှစ်အတွင်း လူငယ်များတွင် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် ရရှိသော ကူးစက်ရောဂါများ(STDs) သည် ယောက်ျားလေးများထက် မိန်းကလေးများတွင် ပိုဖြစ်ပွားနေပြီး၊ အချိုး အားဖြင့် ၂း၁ ဖြစ်သည်။ အသက် (၂၀)နှစ်အရွယ် အချိုးအညီအမျှရှိသည်။ ၁၉၉၉−နှစ်တွင် ကမ္ဘာတဝန်းတွင် ဆစ်ဖလစ်၊ ဂနိုရီးယားချလမ်မိုင်ဒီးယားနှင့် ထရိုင်ကို မိုနီယားဆစ်ရောဂါအသစ်တွေ့ရှိသူ ၃၄၀−သန်းရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
STD photo library Archived 21 July 2010 at the Wayback Machine.
Microbicides Archived 15 July 2010 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လိင်မှတဆင့်_ကူးစက်တတ်သော_ရောဂါ&oldid=744453" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၈:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။